Nepali Christian Bible Study Resources - पवित्र आत्माको व्यक्तित्व
» अध्ययन मालाहरू » पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य » १ पवित्र आत्माको व्यक्तित्व
पवित्र आत्माको व्यक्तित्व
पाठ १—पवित्र आत्माको व्यक्तित्व
के पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ कि उहाँ केवल कुनै शक्ति, बल, एक प्रकारको ऊर्जा, वा “वस्तु” मात्रै हुनुहुन्छ?
धेरै झूटा शिक्षाहरूले पवित्र आत्माको व्यक्तित्वको बारेमा गलत अवधारणाहरू सिकाउँछन्। उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरू इन्कार गर्छन्।
के पवित्र आत्मा साँच्चै कुनै वस्तुझैं “यो” (it), ऊर्जा, सक्रिय शक्ति, वस्तु, ख्रीष्टिय विज्ञान, ऊर्जाको अदृश्य शक्ति इत्यादि हुनुहुन्छ?
पवित्र आत्मा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनी हामी कसरी जान्न सक्छौं?
पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने उहाँमा व्यक्तित्वका सबै पृथक गुणहरू छन्।
व्यक्ति भनेको के हो? कसैमा व्यक्तित्व छ कि छैन भनी कुन कुराले निर्धारण गर्दछ? व्यक्तित्वका निम्ति महत्त्वपूर्ण गुणहरू के-के हुन्? निम्न तालिकाले “व्यक्ति” हुन चाहिने तीन तत्वहरूलाई देखाउँदछ, १) विचार, २) इच्छा, ३) भावना।
यस पाठको सुरुमा पवित्र आत्मालाई पानीसँग तुलना गरिएको यहोवाका साक्षीहरूको भनाइलाई उद्दरण गरिएको थियो। पानी एउटा व्यक्ति होइन। पानीले सोच्दैन, विवाद गर्दैन र पानीलाई केही पनि थाह हुँदैन। पानीले छनौट गर्दैन, नता कुनै निर्णय गर्दछ। पानीले कुन बाटो भएर यात्रा गर्ने हो भनी निर्णय गर्दैन; यो त बहन्छ मात्र। पानीको भावनाहरू हुँदैन। तपाईंले पानीलाई उमाल्नुहुँदा त्यो रिसाउँदैन। वर्षातको समयमा, पानीका थोपाहरू दु:खी र निराश हुँदैनन्। वर्षाले केही महसुस गर्दैन, किनभने यो कुनै व्यक्ति नै होइन।
पवित्र आत्माको विषयमाचाहिँ के नि? के पवित्र आत्माको विचारशक्ति, इच्छा र भावनाहरू छन्?
के पवित्र आत्माको विचारशक्ति छ?
पवित्र आत्माले परमेश्वरका कुराहरू जान्नुहुन्छ भनी बताउनु नै उपरोक्त खण्डको आशय हो। कुनै मानिसले परमेश्वरको बारेमा र उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा जान्दैन, तर पवित्र आत्माले जान्नुहुन्छ। केही कुराहरू जान्नको निम्ति, उहाँसँग विचारशक्ति हुनैपर्छ। पवित्र आत्मा विश्वासीहरूलाई परमेश्वरका कुराहरू प्रकट गर्नुहुने हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ भनी यस खण्डले बताउँदछ। सिकाउने सम्बन्धमा पहिलो नियम हो शिक्षकले आफूले के पढाइरहेको छु भनी जान्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। हामीलाई थाह नभएको कुरा हामीले सिकाउन सक्दैनौं। पवित्र आत्मा सिद्ध समझ र विचारशक्ति भएको हाम्रो सिद्ध शिक्षक हुनुहुन्छ।
यशैया ११:२ पढ्नुहोस् र परमेश्वरका आत्माको सम्बन्धमा सातओटा वर्णनहरू ध्यान दिनुहोस्। बाइबलमा, प्राय: जसो सात सङ्ख्याले पूर्णता र सिद्धताको चित्रण गर्दछ। परमेश्वरका आत्मा समझमा सिद्ध, सल्लाहमा सिद्ध, ज्ञानमा सिद्ध इत्यादि हुनुहुन्छ। यी सबै शब्दहरूले विचारशक्तिको बारेमा वर्णन गर्दछन्।
तर विचारशक्ति मात्रले पनि कसैमा कुनै व्यक्तित्व छ भनी प्रमाणित गर्दैन। त्यहाँ इच्छा र भावना पनि हुनुपर्छ।
के पवित्र आत्माको इच्छाशक्ति छ?
के पवित्र आत्माले निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, रोज्नुहुन्छ?
“तर यी सबै कुराहरू एउटै र उहीं आत्माले नै गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नै _______________ हरेकलाई अलग-अलग बाँडिदिनुहुन्छ” (१ कोरिन्थी १२:११)। कुन विश्वासीलाई कुन वरदान दिने भनेर कसले निर्णय गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले हरेक विश्वासीलाई उहाँकै रोजाइ अनुसार अलग-अलग गरी बाँडिदिने निर्णयहरू गर्नुहुन्छ। उहाँको इच्छा छ!
प्रेरित १६:६-७ पढ्नुहोस्। एशियामा परमेश्वरको वचन प्रचार नगर्नुभनी कसले निर्णय गर्नुभयो? ___________________ उनीहरू बिथिनिया जानु हुँदैन भनी कसले निर्णय गर्नुभयो? ___________________ उहाँले उनीहरूलाई निर्देशित गर्नुभयो र डोर्याउनुभयो। उनीहरू कुनै वस्तु, कुनै शक्ति वा कुनै प्रकारको ऊर्जाद्वारा डोर्याइएका थिएनन्। होइन, उनीहरू एकजना व्यक्तिद्वारा डोर्याइएका थिए। के तपाईंले कुनै “ऊर्जा” ले निर्णय लिएको देख्नुभएको छ? के चट्याङ्गको झट्काले यसो भन्छ, “आज म कहाँ पड्किऊँ भनेर आफैं निर्णय गर्नु पर्ला जस्तो छ”?
कसैमा व्यक्तित्व हुनको निम्ति विचारशक्ति र इच्छासँग-सँगै अर्को एउटा तत्व पनि चाहिन्छ।
के पवित्र आत्माको भावना वा मनोभाव छ?
हिब्रू १०:२९ को अन्तिम हिस्साले यस्तो व्यक्तिको बारेमा बताउँदछ जसले “अनुग्रहको आत्मालाई ________________ गरेको छ”। “अपमान” शब्दको अर्थ हो, बेइज्जत गर्नु वा रिस उठाउनु। के तपाईंले भावना नै नभएकोलाई अपमान गर्न सक्नुहुन्छ? रिसको भावना राख्न सक्नेलाई मात्र तपाईंले रिस उठाउन सक्नुहुन्छ।
एफेसी ४:३० पढ्नुहोस्। पवित्र आत्माको भावना छ भनी यस पदले कसरी देखाउँछ? __________________________________________________ “शोकित” पार्नु भनेको निराश बनाउनु वा पिडा दिनु। “शोक” शब्दले घृणा र प्रेम दुवै अर्थ दिन्छ। निम्न उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्:
एकजना प्रहरीले मद्यको दुरुपयोगलाई घृणा गर्दछ। उसले यसद्वारा हुने समस्याहरूलाई देखेको छ। मत्त भएको चालकद्वारा निर्दोष मानिसहरू गाडी दुर्घटनामा मरिरहेका उसले देखेको छ। मद्यको दुरुपयोगको कारण घरहरू भताभुङ्ग भएको र विवाहहरू तहसनहस भएको उसले देखेको छ। त्यस प्रहरीले उक्त मद्यले सिर्जना गर्ने समस्याहरू मानिसहरूलाई बुझ्न सहायता गर्न आफैंलाई समर्पण गर्दछ र जवानहरूलाई यी खतराहरूको बारेमा चेताउनी दिन धेरैजसो विद्यालयहरूमा सिकाउने गर्दछ। त्यसपछि एकदिन उसले अति प्रेम गरेको उसको आफ्नै छोरा आफैं मत्त भएको हुनाले गाडी दुर्घटनामा परेको थाह पाउँछ (तर राम्रो कुरा, एउटै मानिस पनि घाइते भएनछन्)। ऊ शोकित हुन्छ। उसको छोराले गरेको कार्यलाई उसले घृणा गर्दछ, तर उसले आफ्नो छोरालाई अति नै प्रेम गर्छ। यो “शोकित” शब्दमा घृणा र प्रेम दुवै हुन्छ।
परमेश्वरको आत्मा पवित्र हुनुहुन्छ (एफेसी ४:३०) र उहाँ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। हामीले पाप गर्दा हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्ने मानिस शोकित बन्नुहुन्छ भनी हामीले महसुस गरिदिए त! पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने उहाँमा एउटा व्यक्तिमा हुनुपर्ने सबै तत्वहरू छन्: विचारशक्ति, इच्छाशक्ति र भावना।
पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने उहाँले एउटा व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने कार्यहरू गर्नुहुन्छ।
“तर शान्तिदाता, जो ____________ ____________ हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनुहुनेछ; उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू _________________, अनि जे-जे मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरूको सम्झना गराउनुहुनेछ।” (यूहन्ना १४:२६)। पवित्र आत्मा शिक्षक हुनुहुन्छ। तपाईंले कुनै शिक्षकको बारेमा सोच्नुहुँदा, कुनै अव्यक्तिक ऊर्जाको नभई सामान्यतया एउटा व्यक्तिको कल्पना गर्नुहुन्छ। विश्वासीको निम्ति यो आनन्दित तुल्याउने सत्यता हो, कि हामीभित्र वास गर्नुहुने व्यक्ति (१ कोरिन्थी ६:१९) हाम्रो व्यक्तिगत शिक्षक हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई हाम्रो मुक्तिदाताको बारेमा अमूल्य कुराहरू प्रकट गर्नसक्नुहुन्छ र उहाँबिना बुझ्न असम्भव आत्मिक सत्यताहरू हामीलाई देखाउनुहुन्छ। उदाहरण: हामीले पुस्तकबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं, तर उक्त पुस्तकको लेखक आफैं हामीसँग रहेर ती कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई सिकाइदिए झन् उत्तम हुनेथियो! यो अति आनन्दपूर्ण कुरा हो कि हामीले बाइबल पढ्दा, बाइबलकै लेखक, पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सिकाउन र अर्ती दिन उपस्थित हुनुहुन्छ। बाइबल पढ्नुअघि, के तपाईं उहाँले तपाईंलाई सिकाउनुभएको होस् र तपाईंलाई आफ्नो मार्ग देखाउनुभएको होस् भनी प्रार्थना गर्नुहुन्छ?
“तापनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र ______________; किनभने उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुनेछैन, तर जे उहाँले सुन्नुहुनेछ, त्यही बोल्नुहुनेछ; अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ” (यूहन्ना १६:१३)। उहाँले डोर्याउनुहुन्छ; उहाँ बोल्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ, उहाँले देखाउनुहुन्छ! केवल व्यक्तिले मात्र यी कुराहरू गर्न सक्दछ।
प्रेरित ८:२९ पढ्नुहोस्। फिलिपलाई “नजिकमा जाऊ, र त्यस रथको साथ लाग” भनी कसले आदेश दिनुभयो? ____________________ कुनै अव्यक्तिक शक्तिले आदेश दिँदैन। [के गुरुत्वबल (अव्यक्तिक शक्ति) ले कहिल्यै तपाईंलाई आदेश दिएको छ?] फिलिपलाई उक्त आदेश दिनुहुने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, र फिलिपले त्यस व्यक्तिको आदेश पालन गरे र उनलाई बताइएझैं गरे। प्रेरित १३:२ सित पनि तुलना गर्नुहोस् (पवित्र आत्माले खेतालाहरूलाई पठाउनुभएको बारेमा)।
रोमी ८:१४ अनुसार, विश्वासीहरूलाई कसले डोर्याउनुहुन्छ? ________________________ विश्वासीहरू कुनै अव्यक्तिक शक्ति वा झोक्का वा ऊर्जाद्वारा डोर्याइँदैनन्। हामी ती आशिषपूर्ण व्यक्ति, पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा डोर्याउइँदछौं।
पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ भनी रोमी ८:२६ मा हामीले सिक्दछौं। उहाँले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ! केवल व्यक्तिले मात्र प्रार्थना गर्न सक्दछ।
पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने उहाँलाई व्यक्ति सम्बन्धि सर्वनामहरू प्रयोग गरिएका छन्।
“तर शान्तिदाता, जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनुहुनेछ; _________ तिमीहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउनुहुनेछ” (यूहन्ना १४:२६)।
यूहन्ना १५:२६ मा पवित्र आत्मालाई व्यक्ति सम्बन्धि प्रयोग गरिएको सर्वनाम भेट्टाउनुहोस्। २६ पद ___________
यूहन्ना १६:७-८ मा पवित्र आत्मालाई व्यक्ति सम्बन्धि प्रयोग गरिएको सर्वनाम भेट्टाउनुहोस्। ७ पद ___________ ७ पद ___________ _____________
पवित्र आत्माको बारेमा यूहन्ना १६:१३-१४ मा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ “उहाँ” शब्द कतिपटक भेट्टाउनुहुन्छ? _________ यो सर्वनाम दोहोरिएको देखेर, तपाईंको निश्कर्ष के हुन्छ? के पवित्र आत्मा अव्यक्तिक शक्ति मात्र हुनुहुन्छ कि उहाँ एक व्यक्ति नै हुनुहुन्छ? _______________________
पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने पिताले “अर्को शान्तिदाता” पठाउनुहुनेछ भनी ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभयो (यूहन्ना १४:१६)।
ग्रीक भाषामा “अर्को” लाई जनाउने दुईओटा शब्दहरू छन्। हेटेरोस् (Heteros) को अर्थ हो “भिन्न किसिमको अर्को”। यो शब्दलाई गलाती १:६ मा अर्कै (झूटा) सुसमाचारलाई जनाउन प्रयोग गरिएको छ। “एल्लोस्” (Allos) को (यो शब्द यहीँ यूहन्ना १४:१६ मा प्रयोग गरिएको छ) अर्थ हो “उही किसिमको अर्को”।
यूहन्ना १४:२६ मा प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई खराब समाचार र असल समाचार दिनुभयो। खराब समाचार यो थियो, कि उहाँ जाँदैहुनुहुन्थ्यो। उनीहरूको ईश्वरीय मित्रले उनीहरूलाई छोड्न गइरहनुभएको थियो। असल समाचार यो थियो, कि अर्को व्यक्तिले उहाँको स्थान लिनुहुनेछ। उहाँचाहिँ उही किसिमको अर्को, अर्थात् ख्रीष्ट आफैंजस्तो अर्को व्यक्ति हुनुहुनेछ। जब पेन्टेकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, त्यो आगमन कुनै शक्ति वा बल वा ऊर्जा वा प्रभावको आगमनभन्दा निकै फरक थियो। त्यसदिन एकजना वास्तविक मानिस आउनुभएको थियो। शान्तिदाता आउनुभएको थियो! (“शान्तिदाता” को अर्थ सहायता गर्न आउनुभएको व्यक्ति हो। पवित्र आत्मा हाम्रो साथी र सहयोगी हुनुहुन्छ)।
पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ किनभने पिता परमेश्वर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ र पुत्र परमेश्वर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यसैकारण पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि व्यक्ति हुनैपर्छ।
मत्ती २८:१९ ले यसो भनेको सोच्नु अर्थहीन हुनेछ, “तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र अव्यक्तिक सकृय शक्तिको नाममा बप्तिस्मा देओ”। २ कोरिन्थी १३:१४ पनि हेर्नुहोस्। यदि पिता व्यक्ति हुनुहुन्छ र यदि पुत्र पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, पवित्र आत्मा पनि व्यक्ति हुनैपर्छ।
सोच्नुपर्ने व्यवहारिक प्रश्नहरू: के तपाईंले पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ भनी साँच्चै मानिलिनुहुन्छ? पवित्र आत्माको बारेमा भजनहरू गाउँदा, के तपाईंले साँच्चै एक व्यक्तिको उपासना गर्नुहुन्छ? परमेश्वरका हरेक सन्तानभित्र पवित्र आत्मा जिउनुहुन्छ। तपाईंभित्र वास गर्नुहुने एक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुराले के तपाईंको जीवनमा फरक पार्छ? एउटा व्यक्ति तपाईंको शान्तिदाता, तपाईंको साथी, तपाईंको सहयोगी हुनुहुन्छ! के तपाईंले साँच्चै पवित्र आत्मालाई एउटा व्यक्तिको रूपमा चिन्नुहुन्छ? के उहाँसँग तपाईंको व्यक्तिगत सम्बन्ध छ? के तपाईं कहिल्यै पवित्र आत्मालाई उहाँ जो हुनुहुन्छ र उहाँले जे गरिदिनुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्नुहुन्छ? के तपाईंले हरेक दिन उहाँलाई आफ्नो शिक्षक भइदिनुहुन र डोर्याइदिनुहुन विन्ती गर्नुहुन्छ?
« पवित्र आत्मा परमेश्वरको व्यक्तित्व र कार्य
पवित्र आत्माको ईश्वरत्व »